३० हजार टन चिनी मौज्दात ! - Janakhabar
३० हजार टन चिनी मौज्दात !
काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले ३० हजार टन चिनी मौज्दात रहेको बताएका छन । बजार अनुगमन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनीजस्ता अतिआवश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्यो भनेर हल्ला चलेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सचिव भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘चिनीको अभाव छैन। आधार, तथ्य र तथ्यांकले भन्छ । दशैंसम्म पुग्छ । तीन महिनालाई पुग्ने मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रतिबद्ध छ कुनै पनि वस्तु अभाव नहोस् । सहरमात्र होइन दुर्गममा पनि अभाव हुँदैन।’
भन्सार विभागकाअनुसार यसपालि २ लाख १२ हजार टन चिनी आयात भएको तथ्यांक रहेको सचिव भट्टराईले बताए। नेपाल आफैं १ लाख ७० हजार टन उत्पादन गर्न सक्षम देखिएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन माग छ।
सरकारसँग वितरण हुने नुन र पेट्रोलियम पर्दाथबाहेक सबै बजारमा उलब्ध हुने र बजारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो। ‘चाडपर्वमा कुनै ठाउँमा अभाव भए तुरून्तै आपूर्ति गरेर समाधान गर्छौं । बजारलाई स्वस्थ र बजारजस्तो बनाउँछौं,’ उनले भने।
यसैबीच , नेपाल आयल निगमले चाडपर्वमा पेट्रोलियम पर्दाथको अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ। निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले दशैं, तिहार र छठमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने जानकारी दिएका हुन्। राजधानीमा आयोजित बजार अनुगमन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै गोइतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सही अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार ७९ प्रतिशत इन्धन मौज्दात छ। नेपालमा डिजेल बढी खपत हुने भएकाले कुल खपतको ६० प्रतिशत डिजेल मौज्दात रहेको गोइतले जानकारी दिए। भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको र मौज्दात पनि भएकाले पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यासकोसमेत कुनै अभाव नरहेको उनको भनाइ छ।
‘जतिबेला पाइपलाइन थिएन रक्सौलमा जामले समस्यारअभाव हुन्थ्यो । अहिले आपूर्तिमा समस्या छैन,’ उनले भने।
यसैगरी, एलपी ग्यासका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पनि नेपालमा ग्यासको अभाव नरहेको बताए । कोभिड महामारीले खपत नै घटेकाले पनि चाडपर्वमासमेत अभाव हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
‘नाकाबन्दी र भूकम्पपछि ग्यासको सायदै अभाव भएको छ । हरेक वर्ष १७ प्रतिशतले खपत वृद्धि भइरहेको छ । तर कोभिड संक्रमण महामारीले झण्डै २० प्रतिशतले खपत घटेको छ । व्यापार नै ३५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । त्यसकारण अभाव हुने अवस्था नै छैन,’ उनले भने । नेपालमा उपभोग्य सामग्री र भ्याक्सिनमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ।
आकाश भैरवको मूर्ति चोरी !
नेपाली नर्स बेलायत पठाउने तयारी : तलब वार्षिक ७५ लाख !
‘ सार्वजनिक यातायातको भाडामा छुटको व्यवस्थालाई कडाइँपूर्वक कार्यान्वयन गर’